Iincwadi zeMidlalo yeTrone, ubumnandi bomzuzwana. | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, I fantasy, Iincwadi, Inoveli, Ezahlukeneyo
Iincwadi zeMidlalo yeTrone.
Uphendlo "lweencwadi Imidlalo yeethrone" Iye yanyuka phezulu kwiwebhu emva kokuba uthotho lweTV lusekwe kweli bali. Umdlalo wetrone yiyo isihloko sokuqala sesaga esidumileyo soncwadi Ingoma yomkhenkce nomlilo. Yincwadi yenoveli eyindumasi eyenzeka kwihlabathi eliyintsomi ebekwe kumaxesha aphakathi.
Umsebenzi ubhalwe nguGeorge Martin kwaye wapapashwa ngo-1996 yindlu yokupapasha yaseHarperCollins eUnited States naseSpain nguGigamesh. Olu luhlu ngokubanzi lubangele ifuthe elikhulu kuluntu olufundwayo. Umbhali wayengasoloko edumileyo, kodwa ukuthandwa kwayo kwasasazeka ngenxa yokuba ngo-2011 yayilungiselelwe umabonwakude yinethiwekhi ye-HBO.
1 Malunga neGRR Martin: inqanaba lokuqala nelesibini
2 Isiseko kunye nenkuthazo
3 Umdlalo webali weTrone webali
4 Iincwadi zeMidlalo yeTrone
4.1 Isiqwenga somdlalo weTrone (1996)
4.2 Iyelenqe lokuNgqubana kwaKumkani (1998)
4.3 Isaqhwithi seNkemba (2000)
4.4 Umthendeleko wezihlwele (2005)
4.5 Icebo loMdaniso kunye neeDragons (2011)
4.6 Incwadi yesithandathu neyesixhenxe (ilinde ukukhutshwa)
5 Indawo entle kaMartin
Malunga neGRR Martin: inqanaba lokuqala nelesibini
UGeorge Raymond Richard Martin Wazalwa ngoSeptemba 20, 1948 eNew Jersey, eUnited States. Ungumbhali kunye nombhali wescreen owaziwa ngokubanzi njengoGeorge RR Martin kwiincwadi zakhe nanjengeGRRM kuluntu lwabalandeli bakhe.
Wakhuliswa njengowokuqala kubantakwabo abathathu; Umama wakhe wayevela kusapho lwaseIreland kwaye utata wakhe wayeyinzalelwane yase-Itali-yaseJamani. Wayengumfundi onomdla ukusuka ebuncinci kakhulu, ke izakhono zakhe zokubhala azithathanga xesha lide ukubonakala.. Wafunda ubuntatheli kwiYunivesithi yaseNyakatho-ntshona e-Evanston kwaye waphumelela ngo-1971.
UMartin watshata noGale Burnick ngo-1975 (umtshato waphela iminyaka emi-4), kwaye Wazimisa njengombhali kule minyaka ilishumi ngokupapashwa kwemisebenzi eliqela yeentsomi; eyonwatyelwe kakhulu yayi Ukufa kokuKhanya (1997). Umsebenzi wakhe wamkelwa ngeembasa ezininzi zeNebula kunye neHugo.
Le mpumelelo yamkhokelela ekusebenzeni njengombhali weshishini laseHollywood nakwimidlalo eliqela kamabonwakude efana Ubuhle kunye nerhamncwa (1987). Ekugqibeleni, Ngo-1996, uMartin wathatha umhlala-phantsi kwaye wazinza eNew Mexico ukuba azinikezele kwakhona kwiincwadi.
Kwangalo nyaka inoveli yazalwa eyaqala inqanaba lakhe lesibini njengombhali, Umdlalo wetrone (1996). Ukusuka apho uGeorge waqala ukubhala i-saga eyamkhokelela kudumo lwehlabathi kwaye usemveliso: Ingoma komkhenkce nomlilo.
Isiseko kunye nenkuthazo
UGeorge RR Martin uzobe kwimbali yamaXesha Aphakathi ukuyila Umdlalo wetrone kunye nezinye izihloko kwi saga Ingoma yomkhenkce nomlilo. Ungquzulwano lwasekhaya kwisithsaba saseNgilani esaziwa njengeMfazwe yeeRoses ezimbini wakhonza njengomthombo wenkuthazo. Ngapha koko, iWesteros, ilizwekazi eliyintsomi apho kwenzeka khona eli yelenqe, liyafana ngobukhulu nokumila kweYurophu.
Umbhali uxele ukuba ukhuthazekile ngababhali abanjengo: JRR Tolkien, kunye no Tad Williams, Abameli abakhulu beentsomi kunye neentsomi. Nangona kunjalo, umsebenzi wakhe wahluke kakhulu kolu lwababhali kuba uphucula iingxoxo zokwenyani ngakumbi kunezo zentsomi.
UGeorge RR Martin ucaphula.
Umdlalo wetrone bobabo uhlobo lwoncwadi lwephupha. Nangona kunjalo, Izinto ebezisetyenziswe kwi-surreal ezisetyenziswe nguMartin kulo msebenzi bezimbalwa kwaye ubuqili.
Umdlalo webali weTrone webali
Impikiswano ngokubanzi Imalunga nomlo oqhubekayo phakathi kwezindlu ezahlukeneyo zasebukhosini beeKumkani ezisixhenxe ngamandla eWesteros, ilizwekazi eliyintsomi eliyilwe nguMartin. Ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokunyanzelwa, umbhali ubukhulu becala usebenzisa iyelenqe lezopolitiko apho amanye amabali ahambelana nothando, ukungcatsha, ubundlobongela, isondo kunye ne-incest branch.
Ekuqaleni iNdlu iTargaryen yalawula yonke into, kodwa uRobert Baratheon uyakwazi ukusithimba isithsaba emva komlo omkhulu, emva kweminyaka engamakhulu amabini emva kolawulo lwedwa kuloo mgca.
Ukusuka kulo msitho, imigaqo-nkqubo emithathu ephambili yoyilo eyenzeka emva kweminyaka elishumi elinesihlanu. Oku kwenzeka ngaxeshanye kwaye kwakhiwe umxholo womsebenzi Umdlalo wetrone kunye nesiqalo sebali Ingoma yomkhenkce nomlilo.
Iincwadi zeMidlalo yeTrone
Uthotho olunempumelelo loncwadi lwahlulwe lwaba ziincwadi ezisixhenxe:
Umdlalo wetrone (1996).
Ukungqubana kwaKumkani (1998).
Uqhwithela lwamakrele (2000).
Umthendeleko wamagwababa (2005).
Umdaniso weedragoni (2011).
Imimoya yasebusika, eqhubeka ngo-2019.
Iphupha lasentwasahlobo onokuba ngumsebenzi wokugqibela kwaye awunamhla ucwangcisiweyo.
Isiza se Umdlalo wetrone (1996)
Kwincwadi yokuqala uMartin uyakwazi ukwakha oko kuya kuba sisiqalo nje sebali elizele izimanga, ngaloo ndlela uthimba umfundi. Ukusweleka kukaKumkani Robert kubangele impikiswano phakathi kweentsapho ezahlukeneyo ukuba yazi ukuba ngubani oza kulandela esihlalweni. Ibali liqala kwiiKumkani ezisixhenxe, apho unyana omkhulu kakumkani ebanga isikhundla sakhe, kodwa lo, kuyabonakala ukuba, wazalwa ngumfazi.
Kwangelo xesha, UMartin uyakwazi ukugxila kubomi bukaDaenerys Targaryan noJon Snow, abalinganiswa abaphambili kolu ngcelele. Ngasentla, kukho udonga olwenza umda phakathi kweWesteros namanye amazwe, ngaphaya koku, amandla amnyama amandulo ayenyuka.
Kwibali ngokusisiseko UJon Snow ngumgqakhwe ongowasebusuku, iqumrhu elijongene nokukhusela udonga. Kuqhelekile kwimbali ukuba uMartín anike amandla nabani na, kwaye abonise ukuba kwanokucinga okuncinci kunokwenza utshintsho olukhulu kwisakhiwo.
UGeorge RR Martin, umbhali woMdlalo weToni.
UDaenerys ngowokugqibela oyinzala yeNdlu iTargaryen, umlawuli ofanelekileyo we-Feeling Kingdoms.. Uhlala ekuthinjweni kwaye akukho namnye owaziyo ngobukho bakhe, kodwa iyelenqe liya kumzisa ngokuthe ngcembe emazantsi, apho azimisele ukubanga itrone ngokufanelekileyo.
Imbali ye le ncwadi iphela xa iDaenerys isinda edangatyeni kwaye iba ngumama weedragons ezintathu.
Isiza se Ukungqubana kwaKumkani (1998)
Kwincwadi yesibini kukho imfazwe yamakhaya kwiziKumkani ezisixhenxe zetrone. Emdeni, iWight's Watch iwele iWall kwaye uJon kufuneka azidlulise njengongenayo ukuze angene emkhosini. I-Daenerys, okwangoku, iintloko zasentshona kunye needragons kunye nabantu bayo.
Isiza se Uqhwithela lwamakrele (2000)
Incwadi yesithathu izinto zisengxakini kwiiKumkani ezisixhenxe ngemfazwe. Le yeyona ncwadi inde, kodwa uMartin usebenzisa ibali ukwenza lula ukufundwa. Esi sitolimende siqala kanye apho iphela khona inoveli yangaphambili, kuya kubakho umanyano, kodwa ekugqibeleni ukungcatsha kuya kuvela.
Ngakolunye uhlangothi, UDaenerys uyaqhubeka nokuhamba ukuya kufuna umkhosi. Okwangoku, eludongeni, akukho namnye owaziyo ukuba imikhosi emibi kaRayder iyavala kwaye uJon Snow uza nabo.
Isiza se Umthendeleko wamagwababa (2005)
Kwincwadi yesine imfazwe iyaphela, kodwa indlela yayo ishiye ilahleko enkulu kunye nokuphalala kwegazi.. UGeorge RR Martin kwesi sihloko uyakwazi ukugxila ngokukodwa kubalinganiswa abathile, ukulawula ukucacisa iinkcukacha zangaphambili kunye nokudala iziza ezitsha.
Isiza se Umdaniso weedragoni (2011)
Incwadi yesihlanu yenzeka ngaxeshanye neyangaphambili, kwaye ijolise kwiziganeko zeDaenerys noJon.. Umlo nxamnye noRayder uqhekeka eludongeni, kwaye umama weedragons uhlala eMeeren nezidalwa zakhe kwaye uyavuma ukutshata ukuze alawule ngoxolo.
Incwadi yesithandathu neyesixhenxe (ilinde ukukhutshwa)
Incwadi yesithandathu isesemveliso, kwaye uGeorge uqikelela ukuba iya kukhutshwa kwi-2019.. Ngokumalunga nokufakwa kwesixhenxe kunye nokugqibela kwesaga, akukho lwazi lunye ngaphandle kwesihloko: Iphupha lasentwasahlobo. Incwadi yesithandathu kulindeleke ukuba iphume ngexesha kwaye ingafiki emva kwexesha, oku kuya kuba yinto encinci kubalandeli abanomdla.
Indawo entle kaMartin
Umdlalo weZihlalo zobukhosi ibingumsebenzi obalaseleyo kwishishini loncwadi nakuhlobo lwayo lwesimbo sokubalisa, iimpawu kunye nokwakhiwa kwabalinganiswa abaninzi. Con isimbo sakhe nesibindi, uGeorge RR Martin ikwazile ukuvelisa indalo ngandlela thile okanye enye inxibelelana kuyo yonke indawo.
Ngaphandle kwemiqulu esixhenxe eyenza uthotho Ingoma yomkhenkce nomliloUMartin ubhale iinoveli ezimfutshane ezahlukeneyo Njenge umhlaba womkhenkce nomlilo (2014) Igorha lezikumkani ezisixhenxe (2015) Umlilo negazi (2018), phakathi kwabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi: Umdlalo weTrone
Emilia Pardo Bazán: iincwadi ezibalaseleyo kunye nobomi bakhe